Ukuphumelela womsebenzi zemfundo - kuyisici esiyinhloko ekuthuthukiseni ngemphumelelo wesikole
With ukuthuthukiswa emphakathini wanamuhla nezenhlalakahle ingane idinga imisebenzi ekhethekile - ukuqeqeshwa. Imisebenzi - akusiyo into ethathwa kalula ngoba ingane osanda beze esikoleni. Ngenxa yalokho kwakumelela ayitholakali, futhi kubalulekile ukwakha ngesimo ikhono lokufunda. Ngo Eminyakeni yokuqala esikoleni kube ukukhathazeka okukhulu. Ubunzima main nazo endleleni ekwakhekeni, ukuthi isisusa wayesanda kufika esikoleni ingane yakho akuhlangene ne izenzo ukuthi kumele enze. Schoolboy ithambekele kakhudlwana nokuqalisa imisebenzi emphakathini ezaziswayo abalulekile emphakathini, ngakho ukwakha ikhono lokufunda ngeke kube lula ngaphandle ukwethulwa ugqozi yobuchopho.
Ngakho, liyini umsebenzi yokufunda? Incazelo simiswe ngalendlela lelandzelako: umsebenzi izimisa umfundi ukuba yena, okudinga ukuhlolwa "lokho ngake kwaba" futhi "lokho ngibé namuhla." Inqubo ushintsho kunqunywa kuncike ayo njengoba into entsha. Ngakho-ke, noma yimuphi umsebenzi kwezemfundo - okungukuthi, okokuqala kunakho konke, ukuhlolwa isinyathelo umfundi imiphumela. Kubaluleke ngokufanayo abafundi abasebasha kudingeka ukulawula yathishela nokuzithiba athonya ikhono lazo ukuhlela nezenzo. Imizamo ukuhlukanisa phakathi izibonelo agumenti abuye etame ukuwakha ukunikeza umfundi ithuba lokubukeza nokuhlaziya izenzo zabo nemicabango kuthabathela ecaleni. Lokhu ikhono yisisekelo onjalo mfanelo ebalulekile njengoba kuveza ngokuvumela elibanzi futhi enomqondo hlaziya izenzo zabo nezahlulelo ngokuya ukwenza ngokuvumelana nemibandela kanye plan of action.
Futhi ukuqeqesha imisebenzi - uhlobo umfundi umsebenzi siqu, ukuba isakhiwo eziyinkimbinkimbi. Lesi sakhiwo liqukethe:
1. yokufunda isimo (imisebenzi), okungukuthi, ukuthi umfundi kufanele bayazi kahle.
2. imisebenzi Training - izinguquko ezibalulekile zemfundo ekuthuthukiseni ngempumelelo umfundi wakhe. Umfundi ihlobene ukuthola izakhiwo isihloko bahlolisisa.
3. self-Action. Lokhu isiqondiso othisha njengoba ngokunemba nokulandela izenzo imodeli.
4. The self-Action: Umfundi kungawufinyelela yalokho noma cha.
Ngokungaguquguquki bahlanganyele abafundi ekufundeni imisebenzi ukusiza imfundiso yokuziphendukela ukwakheka kancane kancane emisebenzini ehlukahlukene engqondo. imisebenzi Training abafundi musa kuphakama ngesikhathi esisodwa, futhi yakhiwe endaweni ubudlelwane kanye nathishela. Ngu Isifaniso ne buciko imisebenzi neziqinile zisencane kungaba ilungelo bathi ekuqaleni konke kuncike uthisha, "samanje umfundi izandla." Nokho, umsebenzi e abasesikoleni wenziwa ngezinto eziphathekako ekahle (imisindo, izinombolo), kanye "ezandleni uthisha" kuyinto ingqondo yakhe. Ukuqeqesha imisebenzi - lena umsebenzi ofanayo inhloso, kodwa njengoba isihloko luyingxenye yalo theory, i-Synergy kunzima kakhulu. Ukuze nokuqaliswa kwalo kudinga materialization lezinto.
Catching perch balancer